Munamato kuna Santa Muerte weIsaitwe Rudo. ? + Zvinobudirira
Munamato kurufu dzvene rudo rusingaiti Unogona kuwana kuti urarame rudo irwo rwaunoda zvakanyanya kana kuunza munhu iyeye akasarudzika uyo akatama nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe.
Unogona kuvimba kuti uyu Musande ane maturusi anodiwa ekukunda izvo zvatisingarerutsi.
Iye anogona kupa hupenyu kune akafa akafa kana kuita kuti aoneke mune akaomesesa uye akaomesesa mwoyo aripo.
1 Chii chinonzi Munamato kuna Santa Muerte nekuda kwekusakwanisa rudo?
1.1 Munamato kurufu dzvene rudo rusingaiti
2 Munamato uyu une simba here?
Chii chinonzi Munamato kuna Santa Muerte nekuda kwekusakwanisa rudo?
ari minamato Ivo vanoshandira chero chipi chinhu chaunoda kuraira.
Mune ino nyaya ndeye wana rudo zvinobudirira.
Musiki Mwari Baba vanotidzidzisa kuburikidza nemagwaro matsvene aanotarisira kubatsira munhu wese anouya padyo naye uye isu tinogona kuswedera padyo naye nemunamato wakananga kana kune chero mutsvene.
La Santa Muerte Zvinozoita mubatsiri wedu mune zvemoyo nemanzwiro.
Nzira dzaanoshandisa kutipa zvikumbiro hazvinzwisisike, asi kana vachizivikanwa kuti vane simba guru, chishamiso chinoitika nekukurumidza uye zvinobudirira.
Munamato kurufu dzvene rudo rusingaiti
Ah Rufu Rufu
rudo rwagogodza pamusuwo wangu, asi mudiwa Santa Muerte,
Akandibata capriciously neni, ini ndadzingwa nekuti ndinoda uye handisi iye.
Kutambudzika kwekushaiwa simba kunondibata kana ndawona kuti handina mumaoko angu mhinduro yedambudziko rangu, ndinokukumbira nekusuwa kukuru kuti unzwe munamato wangu, ndinovimba unoteerera uye unonzwa sei kurohwa kwangu nemurungu wangu achataura, munhu wandinoda rudo rwusingagone asi ini ndoda kuti chishamiso chekuva naye padivi rangu chiitike, kuti zvinogoneka ndosaka ndauya kwauri, kuti une mutsa uye unoshamisa.
Ini ndinoda kuti munhu iyeye ave mumwe wangu uye adzorerwe nerudo rwake rwese, ini ndichave unoonga kwauri uye nazvo ndinotenda akatendeka kune chako chitendero.
Ndichakumbira iwe nguva yakakodzera kuti chikumbiro changu chizadzikiswe apo ini ndakamirira, ini ndicharatidza kuvimbika kwangu nekupa zvipiriso zvangu kwenguva yakareba kwauri Wangu mudiwa Rufu rwakaropafadzwa.
Ah, White White hanzvadzi, ndinovimba nemi uye ndinoisa kutenda kwangu kese mamuri, ndinovimba muchanditeerera uye muzadzisa chishuwo changu. Saka ngazvive.
Izvi munamato werudo Santa Muerte chishamiso!
Kuda uye kusadzoserwa Nderimwe rematambudziko makuru anotambura kwete nhasi chete asi kubva pakutanga kwenguva.
Nguva zhinji tinozvivimba zvakanyanya kuti zvinhu zvakanaka mumumwe wedu uye tinoshamisika kana tazvirasa.
Iko panguva iyoyo kuti munamato uyu unova chombo chedu chakavanzika chinogona kutibatsira kukunda muhondo yerudo rwakasimba, rwechokwadi uye rweupenyu hwese.
Munamato uyu une simba here?
Ehe, ine simba kwazvo, kunyanya kana ichiitwa nekutenda kunobva pamoyo.
Mamwe mazano ekuita kuti mutsara uyu ushande zvakanyanya gadzira aritari inokosha mumba medu mairi isu mune maviri makenduru matsvuku uye machena, chena uye tsvuku yakasimuka pamwe chete nemifananidzo mitatu yemunhu waunoda.
Iwe unogona zvakare kunyora zita remunhu padivi pedu uye chirevo chepfupi chakakosha asi chinonyanya kukosha kugara uchitenda.
Gara uchitenda musimba remunamato kune inoera Nyefu Rufu nekuda kwe rudo rusinga bviri.
Simba munamato wekuda kundifonera